QM Oo War Kasoo Saartay Jeneral Lagu Eedeyay In Uu Xariir La Leeyahay Al-Shabaab – Radio Baidoa
By Webmaster	 On Oct 29, 2020
Golaha Ammaanka QM ayaa shaaca ka qaaday in wax dambi oo ku saabsan xiriir Al-Shabaab lagu waayey Jeneral Saadaq Cumar Maxamed, oo ah taliyaha ciidamada booliska gobalka Banaadir.
Safiirka Shiinaha ee QM, Zhang Jun ayaa qoraal uu soo saaray ku yiri “Waa mowqifkeena joogtada ah in cunaqabteenada noqdaan kuwa aan laga lahayn ujeedo gaar ah. Talalabo kasta oo guddiga ay qaadaan waa in looga dan leeyahay joogteynta nabadda iyo xasilloonida Soomaaliya, kana fogaadan saameyn kasta oo xun oo ay ku yeelan karto horumarka nolosha iyo hantida shacabka Soomaaliyeed. Codsiyada sharciga ah ee ay sameeyaan Soomaalida waa in la siiyaan dareenka iyo tixgelinta ay mudan yihiin. Waxaan soo dhoweeneynaa sharaxaadda lagu sameeyey eedeymaha ka dhanka ah Jeneral Saadaq Cumar Maxamed, taliyaha ciidamada booliska gobalka Banaadir.”
Weerar Ka Dhacay Faransiiska